Iindaba - Yintoni ekufuneka uyazi malunga negumbi lokulala?
Igumbi lokulala linokuba yi-lebensraum ebalulekileyo ebomini bethu. nokuba ulungiso lwegumbi lokulala ngexabiso eliphantsi lunokuba nefuthe kumgangatho wokuphumla kwabantu, emva koko uchukumise ubomi babantu, umsebenzi kunye nokufunda. ke ngoko ngaba igumbi lokulala kufuneka lenziwe nje ukuba lilungiswe?
iimveliso zewayini IVinyl
Ke ukhetha njani umgangatho wegumbi lokulala? Uphando lubonisa ukuba abantu bachitha isiqingatha sexesha labo kwigumbi lokulala. Umgangatho wegumbi lokulala awuhambelani kuphela nomgangatho wokulala kwabantu, kodwa uchaphazela ngokuthe ngqo impilo yabantu. Ke, imigangatho yegumbi lokulala kufuneka ibe ye-eco-friendly kunye nezinto ezingangcolisiyo; indawo yamagumbi okulala amancinci okanye angakhanyiswanga kakuhle, ungakhetha umgangatho okhanyayo oza kwenza ukuba indawo ibonakale inkulu kwaye ikhanya ngakumbi.
WPC IVinyl nokwadala Surperiority:
Izinto 1.Raw 100% ukhuselo lokusingqongileyo
Impahla eluhlaza yomgangatho wethu ngumgangatho ophezulu we-PVC yindalo esingqongileyo, engenabungozi kunye nezixhobo ezihlaziyekayo, ayinazo izinto eziyingozi ezinjenge-benzene, i-formaldehyde, i-matal enzima, akukho nto inyibilikayo enyibilikayo, akukho radiation.
Umgangatho wethu une-skid ukumelana okukhethekileyo, umaleko wokunxiba onganyangekiyo kumgangatho kunye nokuthelekiswa nezinto eziqhelekileyo zomgangatho, Umgangatho wethu ophezulu wokungqubana xa umanzi.
Umgangatho we-Antimildew kunye ne-Antibacterial
Umgangatho wethu womgangatho ngokusebenzisa i-antibacterial ekhethekileyo, inkqubo yokulwa nokungcoliswa, unamandla okubulala ibhaktheriya, unqanda ukuveliswa kwebhaktheriya.
4.Fudumele kwaye ikhululekile
Umgangatho wethu uthambile, ubhetyebhetye, intsebenzo elungileyo yokuqhutywa kwe-thermal, ubushushu ngokulinganayo, ukuhamba ngeembadada kumgangatho wethu uzive ushushu kwaye ukhululekile.
5.Waterproof kunye Dampproof
Eyona nto iphambili kumgangatho wethu yivinl resin, i-vinyl resin ayinakunqwenela ngamanzi, kwaye ayizukwenzeka kukungunda ngenxa yokufuma okuphezulu.
6.I-Insanely Thin kunye nokuKhanya
Umgangatho wethu ubukhulu 3.2mm -12mm, ubunzima 2-7.5kgs / sq.m., Ngaphantsi kwe-10% yezinto eziqhelekileyo zomhlaba, zinezibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto kulondolozo nasithuba sogcino lwesakhiwo esiphakamileyo, ikwanalo nethuba elilodwa kwisakhiwo esidala ukwakhiwa ngokutsha.
ukuba uyafuna WPC IVinyl nokwadala Umthengisi, ungasithumela umyalezo.
Ixesha Post: Apr-26-2020